१ कोरिन्थी १५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ कोरिन्थी १५:१-५८
१५ अब ए भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई त्यही सुसमाचार बताउँछु, जुन मैले तिमीहरूलाई घोषणा गरेको थिएँ, जुन तिमीहरूले स्वीकारेका थियौ र त्यसमा तिमीहरू दृढ पनि छौ। २ तिमीहरूले मबाट सुनेको सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार पनि भइरहेको छ र यसलाई तिमीहरूले बलियो गरी पक्रिराख नत्र त तिमीहरू बेकारमा येशूको चेला बनेका हुनेछौ। ३ किनकि मैले पाएका कुराहरू मैले तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ र तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही हो कि धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिमै ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका लागि मर्नुभयो; ४ अनि उहाँलाई गाडियो, हो, धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिमै उहाँ तेस्रो दिनमा ब्यूँताइनुभयो; ५ अनि उहाँ केफास र त्यसपछि बाह्रै जनाकहाँ देखा पर्नुभयो। ६ त्यसपछि उहाँ एकैचोटि पाँच सयभन्दा धेरै भाइकहाँ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरैजसो अहिलेसम्मै छन्‌ तर कोही भने मृत्युको चिर निद्रामा परिसकेका छन्‌। ७ यसपछि उहाँ याकूबकहाँ अनि त्यसपछि सबै प्रेषितहरूकहाँ देखा पर्नुभयो; ८ तर सबैभन्दा अन्तमा, मानौं बेला नपुगी जन्मेको मानिसकहाँ जस्तो गरी उहाँ मकहाँ पनि देखा पर्नुभयो। ९ प्रेषितहरूमध्ये म सबैभन्दा सानो हुँ र म प्रेषित भनिन लायक पनि छैनँ, किनभने मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई खेदो गरें। १० तर म जे हुँ, त्यो परमेश्वरको असीम अनुग्रहले गर्दा भएको हो। अनि उहाँले मलाई देखाउनुभएको असीम अनुग्रह बेकार साबित भएन तर मैले तिनीहरू सबैले भन्दा धेरै मेहनत गरें अनि त्यो म आफैले त होइन तर परमेश्वरले मलाई देखाउनुभएको असीम अनुग्रहले गरेको हो। ११ तथापि, चाहे मैले होस् वा तिनीहरूले, यसरी हामीले यही कुरा प्रचार गरिरहेका छौं अनि तिमीहरूले विश्वास गरेका पनि छौ। १२ अब यदि ख्रीष्ट मृत्युबाट ब्यूँताइनुभयो भनेर हामी प्रचार गर्छौं भने मरेकाहरू पुनर्जीवित* हुँदैनन्‌ भनी तिमीहरूमध्ये कोही-कोही कसरी भन्छौ? १३ निस्सन्देह, यदि मरेकाहरू पुनर्जीवित हुँदैनन्‌ भने ख्रीष्ट पनि ब्यूँताइनुभएको छैन। १४ तर यदि ख्रीष्ट ब्यूँताइनुभएको छैन भने हाम्रो प्रचारकार्य साँच्चै बेकार हो र हाम्रो विश्वास पनि बेकार हो। १५ यसबाहेक, हामी परमेश्वरका झूटा साक्षी पनि ठहरिन्छौं किनभने परमेश्वरले ख्रीष्टलाई ब्यूँताउनुभयो भनेर हामीले उहाँको विरुद्धमा साक्षी दिइरहेका हुन्छौं जबकि परमेश्वरले मरेकाहरूलाई वास्तवमा ब्यूँताउनुहुन्न भने उहाँले ख्रीष्टलाई पनि ब्यूँताउनुभएन। १६ यदि मरेकाहरू नब्यूँताइने हुन्‌ भने ख्रीष्ट पनि ब्यूँताइनुभएको छैन। १७ साथै, यदि ख्रीष्ट ब्यूँताइनुभएको छैन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ हो; तिमीहरू अझै पनि तिमीहरूका पापैमा छौ। १८ यसो हो भने मृत्युको चिर निद्रामा परेका ख्रीष्टका चेलाहरू पनि सधैंको लागि नष्ट भए। १९ यदि हामीले यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा आशा राखेका हौं भने हामी मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा दयनीय हौं। २० तथापि, अब ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट ब्यूँताइनुभएको छ, जो मृत्युको चिर निद्रामा परेकाहरूमध्ये अगौटे फल हुनुहुन्छ। २१ किनकि एकै जना पुरुषले गर्दा मृत्यु आयो, त्यसकारण मरेकाहरू पनि एकै जना पुरुषद्वारा पुनर्जीवित पारिनेछन्‌। २२ जसरी आदमले गर्दा सबै मर्दैछन्‌, त्यसरी नै ख्रीष्टले गर्दा सबैलाई जीवित पारिनेछ। २३ तर हरेकको आ-आफ्नै क्रमअनुसार: अगौटे फलको रूपमा ख्रीष्टलाई, त्यसपछि जो ख्रीष्टका हुन्‌, तिनीहरूलाई उहाँको उपस्थितिको दौडान जीवित पारिनेछ। २४ यसपछि, उहाँले सबै सरकार, सबै अख्तियार र शक्तिलाई नामेट पारेपछि अन्तमा परमेश्वरलाई राज्य सुम्पनुहुनेछ, जो उहाँको बुबा हुनुहुन्छ। २५ यसकारण परमेश्वरले सबै शत्रुलाई उहाँको पाउमुनि नराखुन्जेल उहाँले राजाको रूपमा शासन गर्नै पर्छ। २६ सबैभन्दा अन्तमा नामेट पारिने शत्रु मृत्यु हो। २७ किनकि परमेश्वरले “सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनुभयो।” तर ‘सबै कुरा पाउमुनि राखिएका छन्‌’ भन्ने तिनको भनाइबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि सबै कुरा उहाँको अधीनमा राखिदिनुहुने परमेश्वरचाहिं उहाँको अधीनमा हुनुहुन्न। २८ तर जब सबै कुरा उहाँको अधीनमा भइसकेको हुनेछ, तब परमेश्वर नै सबै थोकका सर्वेसर्वा होऊन्‌ भनेर छोरा पनि सबै कुरा उहाँको अधीनमा राखिदिनुहुनेकै अधीनमा बस्नुहुनेछ। २९ नत्र भने मरेकाहरू हुनको निम्ति बप्तिस्मा भइरहेकाहरूले के गर्ने? मरेकाहरू पक्कै नब्यूँताइने हुन्‌ भने मरेकाहरू हुनको निम्ति तिनीहरूको बप्तिस्मा किन भइरहेको छ त? ३० हामी पनि किन हरघडी जोखिममा परिरहन्छौं? ३१ म दिनहुँ मृत्युको सामना गर्छु। भाइहरू हो, यो कुरा त्यति नै पक्का छ, जति हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा म तिमीहरूको विषयमा गर्व गर्छु भन्ने कुरा पक्का छ। ३२ यदि अरू मानिसहरूले जस्तै मैले पनि एफिससमा जङ्गली जनावरहरूसित लडेको भए मलाई के फाइदा हुन्थ्यो र? यदि मरेकाहरू ब्यूँताइनेछैनन्‌ भने “आओ, हामी खाऔं र पिऔं, किनकि भोलि त हामी मरिहाल्छौं पो।” ३३ नबहकिओ। नराम्रो सङ्गतले राम्रो आनीबानीलाई बिगार्छ। ३४ परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्न होसमा आओ र पाप नगरिरहो, किनकि कसै-कसैसित परमेश्वरको ज्ञान छैन। तिमीहरूलाई सरममा पार्न मैले यसो भनेको हुँ। ३५ तैपनि, कसैले सोध्नेछ: “मरेकाहरू कसरी ब्यूँताइनेछन्‌? साँच्चै, तिनीहरू कस्तो किसिमको शरीर लिएर आउनेछन्‌?” ३६ हे बेसमझ मानिस! तिमीले जे छर्छौ पहिले त्यो नमरीकन फेरि जीवित हुँदैन; ३७ अनि तिमी जे छर्छौ, त्यो उम्रने बिरुवा* होइन तर गेडा मात्र हो, चाहे त्यो गहुँको होस् वा अरू कुनै अन्नको; ३८ तर परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको शरीर दिनुहुन्छ अनि हरेक बीउलाई आ-आफ्नै शरीर दिनुहुन्छ। ३९ सबै शरीर एकै किसिमका हुँदैनन्‌, तर मानिसको शरीर एक किसिमको, गाईवस्तुको शरीर अर्कै किसिमको, चराचुरुङ्गीको शरीर अर्कै किसिमको र माछाको शरीर अर्कै किसिमको हुन्छ। ४० त्यसैगरि, स्वर्गीय शरीर र पार्थिव शरीर पनि छन्‌; तर स्वर्गीय शरीरको गौरव एक किसिमको हुन्छ अनि पार्थिव शरीरको गौरव अर्कै किसिमको। ४१ सूर्यको गौरव एक किसिमको हुन्छ, चन्द्रमाको गौरव अर्कै किसिमको हुन्छ अनि ताराको गौरव अर्कै किसिमको हुन्छ; भनौं भने, हरेक ताराको गौरव फरक-फरक हुन्छ। ४२ मरेकाहरू पुनर्जीवित हुँदा पनि त्यस्तै हुन्छ। विनाशमा छरिएको शरीर अविनाशमा ब्यूँताइन्छ। ४३ अनादरमा छरिएको शरीर गौरवमा ब्यूँताइन्छ। दुर्बलतामा छरिएको शरीर शक्तिमा ब्यूँताइन्छ। ४४ रगत र मासुको शरीर छरिन्छ, स्वर्गीय शरीर* ब्यूँताइन्छ। रगत र मासुको शरीर हुन्छ भने स्वर्गीय शरीर पनि हुन्छ। ४५ यस्तो पनि लेखिएको छ: “पहिलो आदम जीवित मानिस* भयो।” अन्तिम आदमचाहिं जीवन दिने व्यक्ति * भए। ४६ तैपनि, पहिलो स्वर्गीय* होइन, रगत र मासुको हो तर पछिल्लोचाहिं स्वर्गीय हुन्‌। ४७ पहिलो मानिस पृथ्वीको हो र माटोले बनेको हो; दोस्रो मानिसचाहिं स्वर्गका हुन्‌। ४८ माटोले बनेको त्यो मानिस जस्तो छ, माटोले बनेका अरू पनि त्यस्तै हुन्छन्‌; अनि ती स्वर्गीय जन जस्तो छन्‌, अरू स्वर्गीय जनहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्‌। ४९ अनि जसरी हामीले माटोले बनेको त्यो मानिसको रूप धारण गरेका छौं, त्यसरी नै ती स्वर्गीय जनको रूप पनि धारण गर्नेछौं। ५० तथापि, ए भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई भन्छु, रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन न त विनाशी अविनाशीको हकदार हुन सक्छ। ५१ हेर, म तिमीहरूलाई एउटा पवित्र रहस्य बताउँछु: हामी सबै मृत्युको चिर निद्रामा पर्नेछैनौं तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ, ५२ एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, बिगुलको अन्तिम आवाजको दौडान। किनकि बिगुल बज्नेछ अनि मरेकाहरू अविनाशी भएर ब्यूँताइनेछन्‌ र हाम्रो परिवर्तन हुनेछ। ५३ किनकि यो जो विनाशी छ, त्यसले अविनाशी रूप धारण गर्नै पर्छ अनि यो जो मरणशील छ, त्यसले अमरता धारण गर्नैपर्छ। ५४ जब यो जो विनाशी छ, त्यसले अविनाशी रूप धारण गर्छ अनि यो जो मरणशील छ, त्यसले अमरता धारण गर्छ, तब लेखिएको यो भनाइ पूरा हुनेछ: “मृत्युलाई सधैंका लागि निलियो।” ५५ “हे मृत्यु, तेरो विजय खै? हे मृत्यु, तेरो खील खै?” ५६ मृत्युको खील पाप हो तर पापको शक्ति मोशाको व्यवस्था हो। ५७ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँले हामीलाई विजयी बनाउनुहुन्छ! ५८ यसकारण, ए मेरा प्रिय भाइहरू हो, अटल र स्थिर होओ, प्रभुको काममा सधैं व्यस्त भइरहो, किनकि तिमीहरूलाई थाह छ, प्रभुमा तिमीहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन।
^ १को १५:१२ * वा, “पुनरुत्थान।”
^ १को १५:३७ * शाब्दिक, “शरीर।”
^ १को १५:४४ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ १को १५:४५ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ १को १५:४५ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ १को १५:४६ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
१ कोरिन्थी १५